‘सावित्री सुवेदी,...‘त्यसका लागि धन्यवाद’
‘बलात्कारीलाई फाँसी दे’ भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि सावित्री सुवेदी
१ भदौ, २०७८, फरकधार ।
अर्धनग्न शरीर । ठिङ्ग उभिएको एक्लो ज्यान । हातमा प्लेकार्ड । र, प्ले कार्डभित्र ‘निर्मलालाई न्याय दे’ ,’मेरो शरीर मेरो अधिकार’ लेखिएका नारा । उनी थिइन्, सावित्री सुवेदी । सुवेदीले ‘बलात्कारीलाई फाँसी दे’ भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि पुगेर निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या भएको ३ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि न्याय नमिलेको आरोप र प्रदर्शनसहित न्यायको माग गरिन् । निर्मला पन्तको घट्नापश्चातै शसक्त आवाज बुलन्द गर्दै आएकी ‘जयनारी’ अभियन्ता सुवेदीले आजको मितिमा आइपुग्दा समेत आवाज उठाइरहेकै छिन् ।
यदि म गलत छैन् भने ‘देशमा अरु महिला अधिकारकर्मी नभएकै हुन् र ?’यो प्रश्नको सन्तुष्ट जवाफ मैले अझै भेटिरहेको छैन् । अधिकारको निम्ति लड्नेहरु एकजुट हुनुपर्छ । घट्नाको किनारा नलागुन्जेल आवाज बुलन्द गरिरहनैपर्छ । तर राम्रो ज्ञान सावित्री सुवेदीमा रहेछ, प्रमाणित भयो । त्यसैले त सबैले भुल्दै गरेको घट्नाउपर आजसम्म एक्लै आवाज उठाइरहेकी छिन् । अन्य सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’मुखी अधिकारकर्मी भन्दा थोरै नै सहि परिमाणमुखी देखिएकी छिन् । यसको लागि धन्यवाद, सावित्री सुवेदी ।
२ भाद्र २०७५, नागरिक ।
मुलुकमा नारी अधिकारकर्मीको खाँचो भएको अबस्था हो र ? विल्कुल होईन । अझ पछिल्लो समय त झन च्याउसरी उम्रिएका अधिकारकर्मीहरुको लिस्ट बनाउने हो भने आजको लेखमा नभ्याइएला पनि । अधिकारकर्मी छन् पनि । आवाज उठाउँछन् पनि । उनीहरूले राखेको माग जायज छन् पनि । तर समस्या कहाँनीर भने, उनीहरूको आवाज सुनिदिने कसले ? प्रभावकारिता के ? सामाजिक सञ्जालमा ‘प्यार–प्यार’ गर्दैमा मात्रै समस्याको समाधान हुने पनि त होईन । तर बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय दिनुपर्ने माग गर्दै सावित्री सुवेदीको नेतृत्वमा महिलाहरुले कालो पेटिकोट लगाएर अर्धनग्न भई माइतीघर मण्डलामा गरेको प्रदर्शनको प्रभावकारिता बेग्लै थियो । भलै त्योताका उनी प्रकाउ परिन् । तर त्यसको चर्चा र उपलब्धि सडक, मिडिया र सरकारसम्म पुग्यो । थुप्रै नारीहरुले बलात्कार विरुद्ध खुलेर बोल्न सक्ने हिम्मत जुटाए । समाजको मानसिकतामा हदसम्म भएपनि बद्लाब आयो । आउने क्रम अझै जारी छ । यसको लागि धन्यवाद, सावित्री सुवेदी ।
३५ वर्षभित्र सिङ्गल मदर बन्छुः सावित्री सुवेदी
१८ बैशाख २०७६, लोकपाटी न्यूज ।
सावित्री सुवेदीको खिसीट्युरी तब सुरु भयो, जतिबेला उनले भनेकी घोषणा गरिन्ः ३५ वर्षमा एक्लै (सिङ्गल मदर) अथवा विवाह नै नगरी बच्चा जन्माएपछि आफु त्यहि बच्चाको लागि समर्पीत हुने बताइन् ।
अर्कोपटक पनि मजाक र गालीको पात्र भइन उनी । उनले भनेकी थिइन्‘मेरो विवाह भएको छैन् तर सेक्स पार्टनर छ ।’ सुन्दा सजिलो तर बर्णन गर्न गाह्रो सवाल हो, यो । कमसेकम म बाँचिरहेको समाजमा । अलि पहिला भोलोदिमिर जेलेनिस्कीलाई पनि मजाक बनाइएको थियो, जतिबेला उनले युक्रेनको राष्ट्रपतिमा उम्मेद्बारी दिएका थिए । तर अन्ततः त्यो प्रमाणित भयो, उनी युक्रेनका वर्तमान वाहवाही बटुलीरहेका राष्ट्रपति हुन् । जसै सावित्री सुवेदीको विहे नगरेरै यौनइच्छा पूरा गर्ने सवाल पनि जायज रहेको प्रमाणित हुनेछ ।
महिलाले आफुले चाहेको पुरुषसँग केही रकम दिएर यौनसम्पर्क राख्ने गर्छन तर त्यो युवक त्यो बच्चाको बुवा भने हुँदैन् । सँगै यो पनि सत्य हो की आजभोलि महिलाहरुले पनि पुरुषका लागि सन्तान जन्माउने गरेका पनि छन् । हामीकहाँ पनि महिलाले यौनइच्छा दबाएर राख्न नहुने सवाललाई उठाइदिनुभयो । सावित्री सुवेदी, यसका लागि धन्यवाद ।
चितवनकी सवितालाई न्याय दिलाउन बालुवाटार पुगेकी सावित्री सुवेदी पक्राउ
२८ जेठ २०७८, केटिएम दैनिक ।
प्रहरीले कयौंपटक उनलाई प्रकाउ गरिसकेको छ, त्यसको लेखाजोखा उनैले राखेकी होलिन् । सबिता भण्डारीको न्यायको लागि शीतल निवासमा प्रदर्शन गर्दैगर्दा काठमाडौबाट प्रकाउ परिन्, मोरङ्बाट प्रकाउ परिन् र कयौंपटक माइतीघर मण्डलाबाट प्रहरीद्वारा प्रकाउ परिन । शारीरिक र मानसिक यातनाको कुरै छोडौं । उनी त्यो अबस्थामा पनि बोल्न छोडेकी छैनन्, जतिबेला उनको पक्षमा समर्थन गर्ने व्यक्तिको उपस्थिति एक पनि नभएको होस । एक्लै बोलिरहिन् । बस्, बोलिरहिन । प्रहरीको प्रकाउ र त्यसपछिको दमन खेप्दा खेप्दा पनि नथाकेर अझै विभेद, अन्याय र अत्याचार विरुद्ध बोलिराखेर गतिम्तो पाठ सिकाउनुभयो । सावित्री सुवेदी, यसका लागि धन्यवाद ।
सुवेदीलाई अनावश्यक नारीबादी भएको, बिनातर्क पनि पुरुषलाई गाली मात्र गर्ने गरेको, सधै पुरुषलाई मात्र दोषी देख्ने गरेको लगायतका आरोपहरु छन् । यहाँ एउटा मात्र प्रसंग उल्लेख गर्न मन लाग्यो । सिनेमा निर्माता–निर्देशक छवि ओझा र शिल्पा पोखरेलबीच उत्पन्न विवादमा सुवेदीले ‘सम्पत्तिका लागि सिउँदो भर्दै हिँड्ने आइमाईका कारणले समाजमा छविबाहरू पीडित छन्, न्याय शिल्पालाई होइन छविलाई देऊ, पुरुष हिंसा अन्त्य गरौँ,’ आदि पदावली उल्लेख गरेको सत्यलाई तपाईं पनि नकार्न सक्नुहुन्न होला ।सधैजसो‘जय नारी’ भन्ने सुवेदीले जय पुरुषु ह्यास ट्याग पनि प्रयोग गरिन् ।
बलात्कारीविरुद्ध माइतीघरमा पेटीकोट प्रदर्शन गरेर चर्चामा आएकी सावित्री सुवेदीले ‘पुरूषको वीर्य भाडामा लिएर ३५ वर्षमा बच्चा जन्माउँछु, परस्त्रीसँग रमाइलो गर्ने र पत्नीलाई पिट्ने व्यक्तिमात्रै रवि लामिछानेका समर्थन हुन्, बलात्कारीलाई झुन्ड्याउनु पर्छ, म नाङ्गै हिडेपनि मलाई बलात्कार गर्ने कसैलाई अधिकार छैन’ लगायतका भनाइहरु अझै ‘भाइरल’ छन् । भाइरल मात्र होईन, एकदमै सार्थक पनि छन् । त्यसैले मूलकमा अझै सावित्री सुवेदीहरुको खाँचो छ, किनकि कोहि त छ, जो निरन्तर लडिरहन्छ, लडिरहन्छ, बस् लडिरहन्छ ।
यति लेख्दैगर्दा मैले छुटाउनै हुँदैन,‘सावित्री जि, बलात्कार बलात्कारीले गर्छ, पुरुषले होइन ।’